Vagadziri Directory - Suppliers & Vagadziri Directory - Alietc B2B
Kuti uwane ruzivo rwakanaka fadza shanduro yako kuCROME, FIREFOX, OPERA kana Internet Explorer.
Iyo B2B Musika
B2B Nhau & Nhau
Kunyangwe iwe uchiita muzvigadzirwa zvakagadzirwa kana zvigadzirwa zvakasvibirira, uchibatanidza iyo Alietc mumusika wedigital inogona kungova yakanaka kune bhizinesi. Kunyangwe iwe tengeserana muzvinhu zvevatengi zvakadai zvokutambisa, zvipfeko or kitchenware, kana kubata muzvigadzirwa zvisina kugadzirwa se bauxite uye potashi, kubudikidza na machira uye plastics.
Mu B2B pamusika, vatengesi vanogara yakasarudzika niche mune iyo isina kufanana vagadziri vanongotengesa zvigadzirwa zvavo, kana vatengi, avo vanongotenga zvigadzirwa, vatengesi ita ese maviri, izvo zvinoreva kuti kana iwe uri mutengesi, Alietc iri kaviri rinobatsira kune rako bhizinesi.
Mufaro wekutengesa paAlietc ndewekuti kana uine zvigadzirwa zvekutengesa, isu tichakubatsira iwe kuwana vatengi vechokwadi vaunovimba navo kutanga hurefu uye hukama hunobatsira. Chinangwa chedu ndechekuita chaizvo izvo zvigadzirwa zvauri kutsvaga kutenga. Wedu B2B chikuva yakanyatsogadzirwa kuti ive nechokwadi chekuti zvese zvaunoda kunge mutengi kana mutengesi zvichasangana zvakanaka, uye nemazvo.
Kuti uite izvi, tinokupa iwe zvishandiso zvese zvaunoda pamawoko ako uye tinokupa yakawanda yekutungamira nezano. Kunyangwe iwe uri mutengesi ane ruzivo rwakanyanya kana kuti ikozvino uri munyika yekushandira sevatengesi, tinokurudzira zvikuru kuti uverenge 'Ratidziro Yevatengesi' sezvo rizere neruzivo rwunobatsira kuti ubatsire kushandisa zvakanyanya nguva yaunoshandisa isu pa Alietc.
Izvo zvaunoda kuti uite zvinotevera
Kutanga, iwe unofanirwa kusaina kune imwe yedu urongwa hwenhengo
Paunenge uchinge wasaina ku Alietc, iwe unozogona kugadzira yako mbiri.
Ndokumbirawo kuti mutore nguva shomashoma yekugadzira ziso rekubata maziso rinozonakidza kune vangangove vatengi kana vatengi - takagadzira Chinyorwa chinobatsira Chekugadzira yako Alietc Profa iro rinongowanikwa kune nhengo. Pamwe pamwe needu vamwe vashandisi akakosha anoshandisa
Kutanga Kutenga kana Kutengesa!
Ngatitangei neizvo iwe zvaunofanirwa kuita kana uine zvigadzirwa zvinotengeswa
Nyora zvako zvigadzirwa (s) zvinotengeswa. Paunonyora zvigadzirwa zvako, haubatanidzi mutengo. Chikonzero mutengo wacho usiri kuratidzwa imhaka yekuti isu tinotenda kuti kuve nekugona kutaurirana kunoenderana nehuwandu hwezvakasiyana zvinoshanda zvakanyanya uye kunowana mhedzisiro iri nani kune vese vanogadzira uye vanotengesa. Vhoriyamu uye yenguva-chiyero zvinhu zviviri zvakasiyana zvinogona kukanganisa zvakanyanya mutengo weyuniti, saka hazvina musoro kuti uzvidzore pachako kune imwechete, yakatarwa mutengo. Zvese zvigadzirwa zvakanyorwa zvinosanganisira "Taura mugadziri" chikumbiro chevatengi chekushandisa kuti avhure hurukuro. Pakutanga, chikumbiro ichocho chichauya kwatiri pano paAlietc uye kana tamboongorora kuti mutengi ariko, ivo vachapihwa zvako zvekunongedzera uye unobva wakasununguka kutaurirana zvakananga nemutengi.
Tarisa Zvikumbiro zveVatengi. Kusiyana nedzimwe misika yedhijitari, Alietc inokurudzira vatengi kutumira zvikumbiro zvezvigadzirwa. Ivo vachakuudza kuti vangani zvigadzirwa zvavanoda uye kana vada kutumirwa na. Iwe unogona ipapo kuisa 'bhidhi'. Zviri nyore! Kana iwe uchinzwa kuti mutengi asiya chero ruzivo rwakakomba, tinogona kukuisa iwe muhukama pamwe nemutengi kuitira kuti iwe ugone kusheedzera izvo zvakanaka.
Zvino, izvi ndizvo zvaunofanirwa kuita kana uine runyorwa rwezvigadzirwa zvaunoda kutenga.
Nhanho yako yekutanga ndeye kutsvaga izvo zvigadzirwa zvaunoda kutenga uye, sezvakakosha, kune vagadziri uye vatengesi vezvigadzirwa izvozvo.
Tumira Chikumbiro Chekutenga Chigadzirwa. Iwe unogona kana kushandisa yedu yekutsvagisa injini yekutsvaga kuti vagadzire vanogadzira kana vatengesi vezvakagadzirwa (izvo) zvauri kutsvaga uye nekutumira "Chigadzirwa Chekutenga chikumbiro"
Nzvimbo mabhendi. Iwe unogona kuisa bhidhi pane chero zvigadzirwa zvakanyorwa kutengeswa pane Alietc papuratifomu
Tumira Chikumbiro Chemhando. Iwe unogona kuisa chikumbiro chechigadzirwa, mauri unojekesa icho zvigadzirwa (s) iwe zvauri kutsvaga kutenga uye zvaunogadzirira kubhadhara (nazvo) - chero mutengesi / mugadziri anogona kupa zvigadzirwa zvauri uchitsvaga uchagamuchira ziviso yekukurumidza yechako chigadzirwa uye unobva waita runhare kana mutengo wauri kutsvaga kubhadhara uchifadza kwavari.
Maitiro ako ekutanga kune chero anogadzira / anotengesa anogara achiuya kuburikidza neAlietc kuitira kuti isu titarise kuenderana kwechikumbiro chako. Kana tangofara iwe uri bhizinesi chairo kana wega, ipapo chikumbiro chako chichaendeswa kune chinogadzira / muvhengisi, pamwe chete nemanyorerwo ako, uye kubva ipapo unogona kubata zvakanangana.
Pano paAlietc chinhu chimwe chatakadzidza pakutanga ndechekuti zvakanakisa zvibvumirano zvinowanzouya zvichikonzerwa nekutaurirana. Izvi zvinonyanya kuitika kune kune yakakura vhoriyamu kana mukana wekudzokorora kuraira. Pane zvakawanda zvinhu zvinoda kutariswa kana zvasvika pakutaurirana mitezo.
Nhanho yako yekutanga ndeyekunyora zvigadzirwa zvaunazvo kutengesa uye kukoka zvinopihwa kubva kune vanokwanisa uye vanoda vatengi. Iwe unogona zvakare kunyora zvigadzirwa nemutengo yakatarwa kana ukasarudza kudaro.
Chechipiri, iwe unogona kutsvaga yedu yakakura dhatabhesi yenhengo dziri kungoda kutsvaga kuti utenge zvigadzirwa zvawakatengesa, kana avo vakatenga izvo, kana zvimwe zvigadzirwa, munguva yakapfuura. Iwe unogona kubva wavatumira mutengo kwaunokwanisa kugovera zvigadzirwa (izvo) zvavari kutsvaga.
Please Cherechedza: Kuti uve nechokwadi chekuti wese anoshandisa Alietc musika anozviita mumweya yakazara iyo ino musika inoshanda nayo, zvichienderana nezera rako rehu nhengo, ungabhadhara mari nyorwa nyorwa kana yekubhadhara ada. Chinangwa chedu kubvisa 'spam' uye vashandisi vasina-yakakomba pachikuva, uye izvi zvakaratidza kuve nzira inoshanda kwazvo. Izvi zvinotsanangurwa zvakadzama muchikamu cheNhengo.
Alietc - Yakanyanya Kupfuura Musika Dhijitari
E-SILK ROUTE VENTURES (YEMAHARA) LIMITED
Products: POS Sisitimu, Yega Service POS, POS Scale
Products: Chicken Yaiba, yehuku Equipment, Egg tireyi, otomatiki Feeding Line
E-TAY INDUSTRIPO CO., LTD.
Products: Base mafuta, PET nebwe, Zinc Sulphate, Chilli, Dragon Muchero
Products: mitambo kusakara, yunifomu yebhasikiti, yunifomu yebaseball, magirovhosi etsitsi, jimeti kupfeka
Eagleridge Enterprise (Hangzhou) Co, Ltd.
Products: Metal Baling Machine, Hydraulic Baling Machine, Metal Briquetting Press, Kucheka Mashini, Kucheka Baler
Products: Compostable mbishi zvinhu, Compostable kurongedza mabhegi, Compostable mafirimu, compostable tablewares, PLA mukombe lids
PASI YEMAHARA Expo KAMPANI
Products: Hyaluronic Acid Dermal Filler, PDO Musungo, Blunt Cannula, Hyaluron Pen
Copyright 2020 © Alietc.com B2B Marketplace & dhairetori, Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. T & C. - PP
Wakakanganwa Password yako?
Dzorerazve Aunti Yangu